Caaryada Graphite ee Soosaarayaasha & Alaabada Qaaliga ah | Qaab China Graphite loogu talagalay Warshadda Birta Qaaliga ah
Vacuum aluminized graphite la isku qurxiyo
Badeecadani waa shay garaaf ah oo loo isticmaalo qalabka aluminiumka. Faakiyuumka loo yaqaan 'vacuum aluminized graphite crucible' waxaa soo saaray daaweyn gaar ah, wuxuu leeyahay nolol adeeg aad u dheer, guud ahaan in ka badan 45 saacadood.
Warshadaha dhalaalaya birta
Birta dhalaalisteeda ayaa ah habka birta looga badalayo gobol isku dhafan oo loo beddelo gobol xor ah. Falcelinta dhimista kaarboon, kaarboon moono oksaydh, hydrogen iyo wakiilo kale oo yarayn kara oo leh oksaydh bireed heerkulkiisu sarreeyo ayaa heli kara walxo bir ah.
Hal-giraan sare oo nadiif ah garaafka iskudhafka ah ee dhalaalida biraha qaaliga ah
Macdanta birta qaaliga ah waxay u qaybsan tahay mid sifeyn ah iyo sifeyn. Biraha qaaliga ah ee nadiifka ah waxaa lagu helaa iyadoo la dhalaalinayo biraha qaaliga ah ee daahirnimada. Qalabka garaafka ee loo adeegsaday sifaynta wuxuu u baahan yahay shuruud sare oo ku saabsan nadiifnimada, cufnaanta badan, daaqa, xoogga iyo tilmaamayaasha kale. Maaddadu waa cadaadis isostatic ah ama garaaf garaysan oo leh seddex dubis iyo afar dubis. Shuruudaha ka baaraandeggu waa kuwo aad u adag, ma aha oo kaliya cabbirka saxda ah, laakiin sidoo kale nadiifinta dusha sare. Qalabkayaga garaafka ah ayaa si adag loo tijaabiyaa oo si taxaddar leh loo xushay si loo hubiyo in ay la jaan qaadi karaan awoodda, saameynta kuleylka ayaa ugu fiican, iyo tiknoolajiyada farsamaynta waa inay buuxisaa shuruudaha naqshadeynta.
Laba-giraan sare oo daahir ah garaaf garaac leh oo dhalaalaya biraha qaaliga ah